Indlu enombono omuhle womfula eChernigov - I-Airbnb
Indlu enombono omuhle womfula eChernigov
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Андрей
Ukuqashwa kwansuku zonke kwendlu imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha kanye nenxanxathela yezitolo yaseHollywood emgwaqeni. I-Streletskaya osebeni lomfula, ilala 4, ilungele kokubili ukuzilibazisa nokuhlala phakathi nohambo lwebhizinisi.
Ikhishi elinendawo yomlilo ifakwe yonke ifenisha edingekayo kanye nemishini, indawo yokudlela yabantu abangu-4, ukufinyelela ku-terrace (kukhona i-barbecue). Ukulala kwakho okungaphazanyiswa kuzohlinzekwa umbhede ophindwe kabili onomatilasi wamathambo. Igumbi linosofa oguqulela ekubeni umbhede ophindwe kabili ojwayelekile ongu-1600x2000.
Ukushisisa okuzenzakalelayo, kuhlale kunamanzi ashisayo. Ngawe udinga kuphela umoya omuhle. Indlu ifakwe yonke into oyidingayo - ilineni lombhede, izinsiza zokugeza, iziliphu, okomisa izinwele, i-ayina, igedlela, isitofu, izitsha, i-TV ne-WiFi, umshini wokuwasha.
Siqinisekisa izingubo zokulala ezisanda kuwashwa, ukuhlanzeka kanye nephunga elimnandi.
Abahambi banikezwa imibhalo.
Unga-oda amasevisi angeziwe:
- i-sauna yabantu abangu-4,
- ukugibela ibhayisikili,
Izindleko kuxoxwa ngazo ngokwehlukana.
Ngokuphambene nendlu kukhona umfula kuphela nepaki yehlathi i-Yalovschina. Ukushisa okuzenzakalelayo, kuhlale kunamanzi ashisayo. Kunendawo yemoto egcekeni, indawo evaliwe.